Semalt: Gqabaza i-imeyile I-imeyile yokuThengisa i-Vos Results De La SEO
Iingcali ze-numériques zisetyenziselwa ukuthengisa nge-email njengendlela yokuthintela ngokungafaniyo le-classement des moteurs de site web site. Ukuba inqununu yokubamba iqela le-correl is difficile à voir, i-hostage ye-campagnes yokuthengisa nge-mail aid:
Ukwenza isicelo sokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo
Qoqa iimbono zeenkcukacha ze-corporation kwiinkcukacha ze-blog
I-imeyile iyakwazi ukuvumela ukuba unikwe umsebenzi wokuthengisa umfanekiso weskrini.
Ii-imeyile zingabonakalisa i-attirer des personnes ngokusebenzisa ezinye i-canaux de médias sociaux
Ngaloo ndlela, i-SEO kunye ne-imeyile ayixhunyiwe ngqo - bay area networking startups. Les engurs de recherche ayifuni nxamnye neentlobo zabanye abantu abangayifumana kwixesha elithile. Nangona kunjalo, ukuthatha inxaxheba ekusebenziseni abaphulaphuli nge-e-mail kuyindlela efanelekileyo yokubamba i-traffic of quality kwi-Web site yakho kwi-exemplaire. I-Artem Abgarian, i-responsable de la réussite client client Semalt kuchaza indlela yokubeka izimvo kunye nokuthengisa nge-email ngokuchaphazela i-referencement.
Ukuzibandakanya kwabasebenzi baseburhulumenteni
Le nombolo ye-numérique kwi-imeyile njenge-les mots-clés ayikho impembelelo kwi-classe SEO. Kodwa, i-imeyile ye-campagnes ye-imeyile yokulungiswa kweengubo zeetayitile ezilungeleyo izixhobo kwi-intanethi yegama elikhethekileyo elixhomekeke kwi-engines de search engines. I-imeyile ikhuthaza ama-comment et le partage. Ngokomzekelo, inqaku elihle kakhulu lebhulogi iyafumana iimpendulo okanye phantsi kwephepha. Le fayili iya kuhambisa i-poste kwi-different platforms kwi-intanethi njenge-médias sociaux. Ngokulandelelana, le nombre de vues de l'article liphucula ukunyuswa kwama-backlink efunekayo ukuthucula i-SEO ye-classification. Ezinye iinkqubo ze-call-to-action ezenziwa ngu-on-list kunye ne-list of e-mail zingabandakanya:
I-Demander ngabafundi be-commenter en bas du blog comment comment postes les aidera
Umkhuthazi kunye noluntu kwi-partager kunye neprojekthi ye-caritatif ethela i-propager un bonne isizathu kunye
Ukunyusa ama-virtual virus kwi-social media ezifana ne-Twitter okanye i-Facebook.
Flux RSS okanye Consommation régulière de contenu
Yenza unqakrazo lwe-public click on le site yakho kwiWebhusayithi ingaba un tâche elula. Kodwa, il peut être difficile de faire en sorte que le même public soit accroché à votre content. Le ngqungquthela isiphumo ngenxa yokuba kufuneka ube yinto ekhethekileyo kunye neentlobo zezinto eziphathekayo. Unomntu ofuna ukufunwa ngumntu ofuna ukufumana uncedo kunye ne-imeyli phambi kokuba ufumane i-notification. Ngokomzekelo, kwi-can:
Qinisekisa ukuba abantu bayazi ukuba bahlala kwi-RSS
Donnez la possibilité de vous abonner à des listes de notification nge-imeyile kwizinto ezithile ezikhethiweyo kunye
Vumela abasebenzisi ukuba babhalele kwi-entities ye-social media, njengokuba uhambelana nevidiyo yakho Isiteshi se-YouTube
I-canaux de médias sociaux d'accès à votre contenu sont un excellent clé pour que les visites continuent à jour sur les articles du blog.
I-Réorienter le content du bulletin
Iinkcukacha eziqokelelwa kwi-imeyile zingasetyenziselwa ukuba zibe negalelo le blog. Abantu baxhamla kwi-intanethi ye-content de ce bulletin ngokubhala imibono yabo. Ngokomzekelo, ii-bulletins zolwazi olude ziyakwazi ukuza kuba ziincwadana zeblogi ezingenza i-attirer ingqalelo idibanise kunye neengcebiso. Incwadi yeenkcukacha zeenkcukacha ziyakwazi ukufumana iimeko zokuba ulwahlulo oluphakathi kwee-media sociaux en augmentation le classement SEO. Le meko ivumela ukuba abantu abangekho abonnelwe kwi-RSS feed yakho.
Xa ufumana iziphumo ezikhankanywe apha, abaxhasi ba Semalt ziye zenza ukuba ii-imeyili zikwazi ukuphucula ii-imeyli ze-SEO. Ngomntu obandakanyekayo, ngokubhekiselele kwi-bulletin, kunye nokufaka i-automatisation ye-notification ye-flux RSS, iziphumo zobuchule bokusetyenziswa kwee-engines zokukhangela iimfuno zokuhlawula. Dlulisa yonke i-blogueur enqwenela ukufumana i-bon bon trafic, i-création d'un bonne list ye-imeyile ingayi-enterprise entries.